१ बर्ष सँगै बस्दा धेरै पटक बच्चा फा’ल्न लगायो,यती राम्री आशा रु’दै आइन मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस – Tufan Media News
९ माघ २०७७, शुक्रबार २१:२७
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, कृपया पुरा हेर्नुहोला ।
काठमाडौं । करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी फेरि खुलेको छ। रोजगारी खुलाउन नेपाल र इजरायलबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच सय जना नेपाली इजरायल जान पाउनेछन्। ‘इजरायल पठाउन कार्यविधि बनाउँदै छौं’, उनले भने,‘छनोट विधि बनाएर छिट्टै कामदार पठाउनेछौं।
विभागले यही जनवरीदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कामदार प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनेछन्। तीन महिनाभित्रै कामदार इजरायल पठाउनेगरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए। सरकार टु सरकार (जीटुजी) मार्फत कामदार इजरायल जान पाउनेछन्।
इजरायलमा जाने नेपाली २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्छ। दसजोड दुई पास गरेर तीन महिनाको केयर गिभर तालिम लिएकाले अवसर पाउनेछन्। दसजोड दुई पास गरी १५ महिने अनमी पढेकाले पनि इजरायल जान पाउनेछन्। इजरायल जान हिब्रु र अंग्रेजी भाषा जान्ने हुनुपर्छ।
इजरायलमा मासिक एक हजार पाँच सय डलर (डेढ लाख नेपाली) पारिश्रमिक पाइन्छ। ३ सय २० डलर फन्डमा जम्मा हुन्छ। कामदार फर्किंदा पाउने प्रावधान छ। सुरुमा १ हजार २ सय ८० डलर पाउँछन्।
इजरायल वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमध्ये आकर्षक मानिन्छ। पुनः सम्झौता भएसँगै इजरायल खुलेको हो। सन् २०१५ सम्झौता भएपनि कामदार इजरायल जान पाएका थिएनन्। त्यतिबेला बिजनेज टु बिजनेस(बीटुबी) मोडेलबाट कामदार पठाइने भनिए पनि मुस्किलले एक सय जना पनि जान पाएका थिएनन्।
इजरायलले केयर गिभर, नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायत नेपाली श्रमिक लैजानेछ। बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहाल र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले इजरायलमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्यले राजदूतको जिम्मेवारी पाएर इजरायलमा गएदेखि नै रोजगारी खुलाउन पहल गर्दै आएकी थिइन्। उनले गत असोजमा इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीसँग सरकारीस्तरमा नेपाली श्रमिक ल्याउनेगरी सहमति गरेकी थिइन्। तुलसी सुवेदीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा भेटीइन जादुमय
१ लाख होईन, १
टिकाको सातो यसरी खाइन
पशुपति शर्मा र टिका
बिजय शाही बाट म
मृ’गौला पाए पछी यती
लामखुट्टेले चालकलाई टोक्दा भक्तपुरमा कार दु’र्घटना
को हुन् युद्ध बानिया ? , जसको प्रेममा छिन् नायिका पूजा शर्मा !
इजरायलले माग्यो एक हजार नेपाली कामदार
यस्तो अवस्थामा भेटीइन जादुमय स्वर भएकी एलिना, सबैलाई चकित पारेकी एलिना चटपटे बेच्दै छाक टार्दै, मनै रुवाउने कथा हेर्नुस
१ लाख होईन, १ करोड पाए पनि बेच्दैन, टिकटक भाईरल १२ बर्षको कुखुराको बास्तविकता (भिडियो हेर्नुस)
टिकाको सातो यसरी खाइन जेरीले…दोहोरीमा सौता का’ण्ड चलेपछि… (भिडियो सहित)
पशुपति शर्मा र टिका पुनको तीज गीत “नकचरी आएको” एकै दिनमा यती धेरै दर्शकको नजरमा -(भिडियो सहित)
हुँदै नभएको ह’त्या आ’रोपमा २१ वर्ष जे’लमा राखियो, म’रेको भनिएको मान्छे जिउँदै भेटिएपछि……
बिजय शाही बाट म ठ’गीए, ‘नेपाल जस्तो सुन्दर देशले यस्ताे ठ’ग्ने व्यक्ति नपाउनुपर्थ्याे: नेल्सन डेलिस